Nabdoonaanta Wadooyinka ee Gaadiidka Magaalada oo laga wada hadlayo | RayHaber | raillynews
HometareenkaAmmaanka Waddooyinka ee Gaadiidka Magaalada waa la Falanqeyn doonaa
27 / 04 / 2014 tareenka, GUUD, WADADA, Headline
Ammaanka Waddooyinka ee Gaadiidka Magaalada waa la Wadahadli doonaa: Shir looga hadlayo Ammaanka Waddada Waddooyinka ee Gaadiidka Magaalada ee ujeeddada ayaa la qaban doonaa si loo wacyigeliyo bulshada oo ku saabsan ammaanka waddada. Aygaz sidoo kale ka mid ah maal-shirka, Monday, April 28 Turkey Sustainable Transport Association marti EMBARQ helay, Istanbul waxay ka dhici doontaa Salt Galata. Shirku wuxuu diiradda saari doonaa amniga safarka ee gaadiidka magaalooyinka, yoolalka iyo istaraatiijiyadaha lagu yareeyo shilalka gaadiidka, iyo sidoo kale ka shaqeynta goobaha caalamiga ah.
Aygaz waa shirkadaha tamarta keentay Turkey ee la fikirka adeeg tayo, ururada caalamiga ah iyo aan dawliga ahayn in ay yihiin saxiixayaasha oo ka mid ah mashaariic badan oo gaadiidka waarta dunida oo dhan fulinta iskaashiga EMBARQ Turkey ee la cagaha.
Under iskaashiga loogu talagalay kor u qaadista wacyiga dadweynaha ee ku saabsan ammaanka wadada, EMBARQ Turkey Sustainable Transport Association marti "Safety Road ee Transport Urban" Shirka Kaapelitalo waxaa la qaban doonaa. 28 waxaa lagu qaban doonaa Pazartesi Salt Galata Istanbul oo ku yaala Karakoy, Istanbul Isniinta.
Taageeridda waxtarka EMBARQ, oo bixiya isticmaalka shidaalka wasakhaysan, hawada wasakheynta hawada iyo qiiqa aqalka dhirta udub dhexaadka u ah bartilmaameedka ugu weyn, Aygaz ayaa sidoo kale ka shaqeeynaya in la yareeyo waxyeellada deegaanka. Autogas, oo leh aalado kaarboon oo ka hooseeya shidaalka kale ee qiimaha laga sameeyay ilaha ilaa meesha ugu dambeysa ee isticmaalka, waxay bixisaa bedelaad deegaan dabiici ah. Iyada oo la adeegsanayo gaadiid LPG sanadkii la soo dhaafay, in ka yar oo ku saabsan 1 million tons oo ah carbon dioxide qiiqa ka dhacay Turkey. Intaa waxaa dheer, ma jirto wax Carbon Carbon ah oo ku jira LPG, oo leh saamiga ugu weyn ee ka dambeeya kaarboonka dioxide ee kululaynta caalamiga ah.
'Ammaanka Waddada ee Gaadiidka Magaalada'; amaanka wadada, yaraynta shilalka gaadiidka, dhinaca ujeedooyinka iyo xeelado Turkey iyo ururrada caalamiga ah in waxbarashada ay sameeyeen wareejinta ku saabsan dhibaatooyinka iyo xalalka sidoo kale la horkeeno doonaa. Security Agaasinka Guud gudahood Shirka on Traffic Safety Platform, wasaaradda gaadiidka, Police Academy Brigade of my Madaxtooyada, EMBARQ Turkey-Sustainable Transport Association,-World WHO Hay'adda Caafimaadka, ka qayb qaadan doonaan sidii Guddoomiyaha a at saraakiisha Bisha Cas iyo IETT. Marka laga soo tago tacliinta, NGO-yada, hay'adaha dawliga ah, dawladda hoose iyo wakiillada qaybaha gaarka ah waxay la wadaagi doonaan waayo-aragnimadooda iyagoo raacaya khibradooda.
Kulanka Golaha Degmada ayaa ka wada hadlay isbedelka magaca weyn
Port of Antalya, Golaha Magaalada ayaa ka wada hadlay Xeebaha iyo Tareenka
Caqabado ayaa ka Gaadha Gaadiidka Guryaha
Gaadiidka Cusub ee Lagu Gaadhay Gaadiidka İzmir
RayHaberhaweenku way taageeri doonaan tartanka